फिल्म : सुपर हिरो भर्सेज राक्षस - मनोरञ्जन - नेपाल
फिल्म : सुपर हिरो भर्सेज राक्षस
डिसी कमिक्सका सुपर हिरोका फ्यानका लागि हो, जस्टिस लिग । भीएफएक्समा नरमाउने र कथामा जीवन्तता खोज्नेलाई यसले रिझाउन सक्दैन ।
हलिउडमा सुपर हिरोको लहर छ । डिसी कमिक्सका सुपर हिरोका कथाले बक्स अफिसमा प्राय: उधुम मच्चाउँछन् । ‘लार्जर देन लाइफ’ यी फिल्ममा भीएफएक्सको उच्च प्रयोग हुन्छ । सुपर हिरोको क्रेज कतिसम्म बढेको छ भने ठूला फिल्म स्टुडियोहरूले एकभन्दा धेरै सुपर हिरोलाई एउटै कथामा उन्न थालेका छन् । पछिल्लो उदाहरण हो, जस्टिस लिग । ज्याक स्नाइडर निर्देशित यस फिल्ममा आधा दर्जन सुपर हिरोलाई देख्न पाइन्छ । स्नाइडरले यसअघि ब्याटम्यान भर्सेज सुपरम्यान निर्देशन गरेका थिए । तीन सय मिलियन डलर लगानीको जस्टिस लिगले मानवीयताको कथा भन्छ । तर, सुपर हिरोको समीकरणमा चुकेको छ । त्यस्तै, भिलेनबाट विश्व बचाउने पुरानो कथामै घुमेको छ फिल्म । यसको पटकथा क्रिस टेरियो र ज्वोस वेह्डमले लेखेका हुन् ।
धेरै वर्षअगाडि मान्छे र भगवान् मिलेर हराएको राक्षस स्टेपनवुल्फ (सिरन हिन्ड्स) फेरि देखा पर्छ । उसको उद्देश्य हुन्छ, संसार ध्वस्त पार्ने । स्टेपनवुल्फबाट बचाउन ब्याटम्यान (वेन एफिल्क)ले अरू चार सुपर हिरोको टिम बनाउँछन्, जसमा वन्डर वुमन (ग्याल ग्याडोट), फ्ल्यास (इर्जा मिलर), एक्युम्यान (ज्यासोन मोमोए) र साइब्रोग (रे फिसर) हुन्छन् । उनीहरू सबै प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा स्टेपनवुल्फबाट पीडित हुन्छन् । पछि यही समूहमा मरिसकेको भनिएका सुपरम्यान (हेनरी क्याभिला) पनि जोडिन्छन् । तर, तीनवटै ‘मदर वक्स’ हडप्न सफल शक्तिशाली राक्षसलाई हराउन सुपर हिरोको ग्याङ सफल होला त ? ब्याटम्यानले टिम बनाउन गरेको संघर्ष, शक्तिशालीे ‘मदर बक्स’को खोजी र स्टेपनवुल्फको राक्षसीपनालाई विशेष महत्त्व दिइएको छ ।
हरेक पात्रको पृष्ठभूमिसँगै जस्टिस लिग सुरु हुन्छ । कुन पात्र कसरी यो कथामा जोडिन आइपुगे भन्नेमा निकै ध्यान दिइएको छ । भलै सुपर हिरोका फ्यानलाई यी दृश्य पट्यार लाग्न सक्छ । ब्याटम्यानले योद्धाहरूको टिम बनाउन थालेबाट चाहिँ मुख्य कथामा प्रवेश हुन्छ । तर, एउटै स्टेपनवुल्फलाई नष्ट गर्न यति विघ्न सुपर हिरोको आवश्यकता किन पर्‍यो ? फिल्म हेरिसकेपछि पनि जवाफ पाइँदैन । बरू यो राक्षसले तीनवटै ‘मदर बक्स’ जम्मा गर्न फरक–फरक समूहसँग लडेका दृश्य रोचक छन् । हजारौँ वर्षअगाडिको घटनालाई वर्तमान समयसँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ, यही पात्रमार्फत, जो आफूलाई ‘संसारको अन्त्य’ दाबी गर्छ । यही राक्षसको अन्त्य गर्न भिन्न क्षमताका सुपर हिरोबीच मिलेमतो हुन्छ ।
सुपर हिरोमध्ये केन्द्रमा हुन्छिन्, ग्याल ग्याडोट । फिल्ममा उनको उपस्थिति सान्दर्भिक र विश्वसनीय बनाइएको छ । उनको चरित्रलाई वन्डर वुमनबाट निरन्तरता दिइएको छ र यसपटक उनी पर्दामा चमत्कारी लाग्छिन् । सुपर हिरोमध्ये फुच्चे केटो फ्ल्यास निकै रमाइलो लाग्छ, जो बिजुली गतिमा दौडन सके पनि ‘नभर्स’ हुन्छ । एक्युम्यानर साइब्रोगचाहिँ फिक्का लाग्छन् । एक्युम्यानको खुसी पानीमा देखिन्छ । कार दुर्घटनामा देहान्त भए पनि प्रविधिको प्रयोगमार्फत बचाइएका साइब्रोग उड्न सक्छन् । स्टेपनवुल्फलाई परास्त गर्न सबैको आवश्यकता पर्ने भएकाले विभिन्न माध्यमबाट सुपर हिरो जम्मा पारिएको हुन्छ । फिल्मको ‘लिडर’ हुन्, ब्याटम्यान । सुपरम्यान त कथाको अन्त्यतिर झुल्किन्छन् । भलै उनीबिना स्टेपनवुल्फबाट संसारलाई जोगाउन असम्भवजस्तै थियो ।
सुपर हिरोको चारित्रीकरण, उनीहरूको विशेष क्षमता देखाइएका दृश्य र भिलियनसँगको भिडन्तलाई जादुइ बनाउन भीएफएक्सको उच्चतम प्रयोग गरिएको छ । खासमा निर्देशक स्नाइडरले फिल्मलाई ‘भगवान् भर्सेज राक्षस’का रूपमा चित्रित गरेका छन् । सन्देह नै रहेन कि सुपर हिरोलाई मानवीयताको पक्षमा उभ्याएर भगवान्को छनक दिने गरी प्रस्तुत गरिएको छ । अनि, स्टेपनवुल्फ त राक्षस भइहाले । हजारौँ वर्षपछि पृथ्वीमा फर्किंदा पनि उनी उत्तिकै भयंकर लाग्छन् । तर, सुपर हिरोहरूसँगको उनको द्वन्द्व अपेक्षाकृत बलियो छैन ।